Tungsten boride waxay leedahay barta dhalaalida sare, adkaanta sare, xasiloonida kiimikada iyo waxyaabo kale
guryaha dhameystiran. Ma aha oo kaliya qalab cusub oo superhard ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay heer sare
adkeysi. Waa shey muhiim u ah rasaasta aan militariga lahayn. Tungsten boride waxay leedahay
jaantusyo wajiga badan, iyo qaabeyaha
Caanaha molecular BW
Lambarka CAS 12007-09
Cufnaanta 10.77 g / cm3
Barta dhalaalida 2900℃
Isticmaala BW waxay leedahay barta dhalaalida sare, adkaanta sare, habdhaqanka sare iyo sare iyo u adkeysiga oksida ee noocyada kala duwan ee warbaahinta. Waxyaabahan aadka u wanaagsan waxay ka dhigaan iskudhafyada WB si ballaadhan loogu adeegsado bey'adda qallalan ee xoqidda dusha sare iyo heerkulka sare ee daxalka elektaroonigga, caaryada tuurista, iskutallaab iwm.
Tungsten waxay dhashay
Biyo cad cad octagonal cad.
Cufnaanta qaraabada 10.77, barta dhalaalaysa ee ku saabsan 2900 ℃.
Biyaha aan lagu milmin, lagu qasi karo aqua regia.
Boron iyo budada tungsten ayaa si wada jir ah loogu diiriyay heerkulka sare.
Tungsten boride waxay leedahay barta dhalaalida sare, adkaanta sare, xasiloonida kiimikada iyo waxyaabo kale oo dhameystiran. Ma aha oo kaliya qalab cusub oo superhard ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay adkeyn sare. Waa shey muhiim u ah rasaasta aan militariga lahayn. Tungsten boride waxay leedahay jaantusyo waji badan, qaabdhismeedka wajiyo kaladuwan sidoo kale waa la beddeli karaa. In ka badan 50 sano, ku qanacsanaanta ugu badan ee tungsten waxaa loo maleynayay inuu yahay WB4, oo leh seddex qaab cabbir oo atamyo boron ah. Xasiloonida heer-sarreynta iyo astaamaha farsamooyinka ee wejiyada qaab-dhismeedka suuragalka ah ee carbidesystem-ka tungsten ayaa si nidaamsan loo darsay iyadoo la isku darayo xisaabinta mabaadi'da ugu horreysa iyo xasiloonida thermodynamic:
Wareegtada ugu sareysa ee aqoonsiga tungsten waa inay ahaataa WB3 oo ka kooban 2-d atamka boron atamka, ma ahan WB4 oo ka kooban 3-D saddexda geesood ee boron atomka.
Waxaa la ogaaday in qaybinta xiiriddu ay kordhayso iyada oo hoos u dhac ku yimaadda tamarta samaysanta ee nidaamka ku dhasha tungsten, oo muujinaysa in aaladaha farsamadu ay si dhow ula xiriiraan xasilloonida heer-kulka leh.
Maaddaama ay gaar u tahay farsamooyinka, korantada iyo magnetka, tungsten boride waxay soo jiidatay fiiro gaar ah cilmi-baarista aasaasiga ah iyo adeegsiga sayniska maaddada.
Sababtoo ah isugeyn faafida yar ee bilaashka ah ee WB, waqtigan xaadirka ah, isku-darka cufnaanta tungsten diboride ayaa badanaa lagu gaaraa iyadoo lagu kala baxayo heerkulka sare iyo cadaadiska. Dhanka kale, maxaa yeelay B wuxuu uumi baxa heerkulka sare. Sidaa darteed, wuxuu toos u diyaarinayaa qalabka wax lagu duubo ee WB oo leh budada tungsten iyo budada boron way adag tahay in la xakameeyo waxyaabaha boronka ku jira, iyo waxyaabo hooseeya (sida W2B) ayaa lagu soo saari karaa habka sintering, sidaa darteed qalabka bucshiradda cufan ee leh WB sida wajiga ugu weyn lama heli karo gebi ahaanba.
Goobta Codsiga: Xidho daahan adkaysi u leh iyo filim semiconductor ah oo loogu talagalay dharka - qaybaha u adkaysta
Xiga: Molybdenum Boride, MoB
Warshadaha budada budada ah ee loo yaqaan 'Tungsten boride'
Warshadda budada loo yaqaan 'Tungsten boride bor'
Soosaaraha budada Tungsten boride
Soosaarayaasha budada Tungsten boride
Tungsten boride budada Qiimaha
Quotes budada Tungsten boride